ရွှေ ဟင်္သာတ (မာလာငါးကင်၊ တရုတ်၊ ရှမ်းအစားအစာ၊ အကင်မျိုးစုံ)… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » ရွှေ ဟင်္သာတ (မာလာငါးကင်၊ တရုတ်၊ ရှမ်းအစားအစာ၊ အကင်မျိုးစုံ)…
ရွှေ ဟင်္သာတ (မာလာငါးကင်၊ တရုတ်၊ ရှမ်းအစားအစာ၊ အကင်မျိုးစုံ)…
Posted by ကို ထွဋ် on Jul 5, 2014 in Aha! Jokes, Satire, Entertainment, Food, Drink & Recipes, Society & Lifestyle | 21 comments
သွားမယ်၊ ၀ါးမယ်၊ မြိုမယ်၊ ဆို့မယ်....
ကဲ.. ကဲ… ဒီတလ သွားမယ်၊ ၀ါးမယ်၊ မြိုမယ်၊ ဆို့မယ်… အစီအစဉ်လေးကနေ ပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်…
ဟီး.. တခါမှကို မလုပ်ဖူးသေးဘဲနဲ့ ကြိုဆိုနေတာ.. နောက်တလဆိုရင်တော့ တကယ်ပြောလို့ရပါပြီ…
ဒီတလမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ သွားစားဖြစ်တဲ့ ဆိုင်လေးကတော့… စမ်းချောင်း ဗဟိုလမ်းနဲ့ ညောင်တုန်းလမ်းထောင့်က ရွှေဟင်္သာတ ဆိုင်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်…
ဒီဆိုင်လေးကိုတော့ ကျွန်တော်ရယ်၊ မဟေသီရယ် သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်…
အခင်းအကျင်းလေးကတော့ မိုက်ပါတယ်.. အမိုးတွေကို အပြည့်မထုတ်ထားပါဘူး.. စည်ပင်ခွန်ရှောင်ချင်လို့ပါ…
မိုးရွာရင်တော့ ထုတ်ပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ ရေပေါ်စားသောက်ဆိုင်လေးပေါ့… စည်ပင်ကမရှင်းနိုင်တော့ မြောင်းတွေပိတ်ပြီး ရေမဆင်းနိုင်လို့… ခွိခွိ…
Kitchen ကလဲ ၂ နေရာတောင် ရှိပါတယ်.. တနေရာကတော့ အထဲမှာ ဖြစ်ပြီး.. နောက်တနေရာကတော့ လမ်းပေါ်မှာပါ… ဒါမှ အနံ့ နဲ့ မြူဆွယ်နိုင်မှာကိုး…
တကယ်ကောင်းတာကတော့ ဆက်ဆံရေးပါ… ပြီးတော့ Free ပေးတဲ့ ဟင်းချို.. ကြက်လည်ပင်းတွေ ဘာတွေကို မုန်းသွားအောင် ထည့်ပေးထားပါတယ်..
တဇွန်းလောက် သောက်ကြည့်လိုက်မယ်… အွန်းးးးးး တကယ်ကို အရသာရှိတယ်ဗျ… အနံ့လေးကလဲ မွှေးပြီး… ပူပူလောလောလေးဆိုတော့ နည်းနည်းတောင် ထပ်သောက်ချင်သွားတယ်…
နောက်တဇွန်းထပ်သောက်တယ်… နောက်တဇွန်းထပ်သောက်တယ်… မိန်းမက မျက်စောင်းထိုးပါပြီ… အိနြေ္ဒကို မရဘူးဆိုပြီး…
ကျွန်တော်လဲ လက်တွန့်သွားပါပြီ.. ချွေးကလဲ နည်းနည်းစို့ပြီဆိုတော့…
ရောက်လာပါပြီဗျာ.. ရောက်လာပါပြီ… ပြောရင်းဆိုရင်း… မှာထားတဲ့ .. ဒီဆိုင်ရဲ့ နာမည်ကြီးလက်ရာ… ငါးကင်နဲ့ ဂဏန်းမဆလာချက်ကလေးပါ…
ငါးကင်က ဒီမှာ ဈေးအမျိုးမျိုး ရပါတယ်.. ၁၅၀၀၊ ၂၀၀၀၊ ၃၀၀၀ ကနေ ၄၀၀၀ ထိ ရှိပါတယ်.. ဒီဆိုင်မှာ ထူးခြားချက်က ဆိုင်ကလေးက ကြီးပေမဲ့ ၄၀၀၀ ကျော်တဲ့ ဟင်းအမယ် မရှိပါဘူး…
ဈေးနှုန်းချိုသာတာကို ပြောလိုခြင်းပါ… ပေးရတာနဲ့လဲ တန်တဲ့အရသာ… အိုးကြီးခွက်ကြီးတွေနဲ့ ထည့်ပေးထားတာ.. ဒါတွေက နှစ်သက်စရာပါ…
အပြောလေးတွေလျှော့ပြီး.. စ ပြီး မြည်းပါပြီ… ကောင်းတယ်ဗျာ.. ငါးကင်လေးက မွှေးကလဲ မွှေး အရသာကလဲ ကောင်း… နဲ့… ရှလွတ် သရေယိုသံ…
မဆိုးဘူးဗျ.. တော်တော်ကောင်းတယ်.. အင်း… တော်တော့်ကို ကောင်းတာဗျ… မဒီက တံတောင်နဲ့ တွတ်ပါပြီ… ကျွန်တော်ချည်းပဲ လက်ဝါးကြီးအုပ်လို့တဲ့.. အွတ်…
တော်ရုံပဲ ကောင်းတယ်… မဒီမှ ပြောသော အသံဖြစ်ပါတယ်… အေးပါဟယ်.. နဂိုစားသလိုစားတာမှ မဟုတ်ဘဲ.. ဒါက မန္တလေးဂဇက်အတွက်ရေးနေတာ ဟ…
ဒါဆို ရှင်ပြောပြောနေတဲ့ Kai က စပွန်ဆာလား..
ပေးမလားဆိုတာတော့ မညှိရသေးဘူး ဟ.. ရပါတယ်.. ပွိုင့်တိုးတောင်းလိုက်မယ်လေ… အဟိ…
ပေးမှာလား ဆရာကြီး… ပုံမှန်ဆို ငါးကင်ဆို ငါးကင်.. ဂဏန်းဆို ဂဏန်းပဲ မှာတာနော်.. ဒီနေ့တော့ စကေးကျော်ကုန်ပြီ…
ဒီနေ့အတွက် စပွန်ဆာကိုတော့ ရွှေဟင်္သာတမှလဲ မကျွေးသလို ဘယ်အဖွဲ့အစည်း ဘယ်ကုပ္မဏီမှလဲ မပေးထားသေးပါဘူး…
နောက်လတွေ လတွေဆိုလဲ ကိုယ့်စရိတ်ကိုယ်စားပြီး ဆက်လက်တင်ဆက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြိုတင် သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါတယ်…
နောက်တခါ ဂဏန်းလေးကိုလဲ မြည်းကြည့်ပါမယ်.. ကောင်းတယ်ဗျ.. ကြက်သွန်နီပါးပါးလေးနဲ့ မဆလာနဲ့မွှေးမွှေးလေးကို ရေစပ်စပ်လေးနဲ့ ချက်ထားတာ…
အားပါးပါး… အနှစ်ကလေး မြည်းတာနဲ့ လျှာကိုလည်သွားတယ်… လည်သွားတဲ့ လျှာလေးကို နဂိုပြန်ဖြစ်ဖို့ နောက်တခါ ထပ်နှိုက်စားလိုက်တယ်…
အဟွတ်အဟွတ် အဟွတ်… ဆီနဲနဲ သီးသွားတယ်ခင်ဗျ.. အစပ်လဲ နည်းနည်း ပါတော့ မျက်ရည်ပါလည်လာတယ်…
အစပ်ပြေ ဟင်းချိုသောက်တော့လဲ ပူတော့… အားးးးးးး… ပူတယ်ဟ… အားလားလားလားးးးးးး…
ဒီတခါတော့ မိန်းမက အလိုက်သိတယ်… ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ နာနတ်သီးဖျော်ရည်လေးကို အလျင်အမြန်မှာပေးတယ်… ဆားဗစ်ကလဲ ကောင်းတယ်… ချက်ချင်းကို ရောက်လာတယ်…
ဟူး… အခုမှ သက်သာသွားတယ်…
ခုနက အဓိက ဟင်းလျာတွေ လာချပြီးတော့… အရံဟင်းလေးတွေ လာပို့ပါတယ်… ဒါတွေကတော့ ငါးနီတူသုပ်… ဟဲ ၅၀၀ ပဲပေးရတယ်…
မြေအိုးမြီးရှည် ၁၀၀၀ ပဲ ပေးရတယ်… ယိုးဒယား သင်္ဘောသီးထောင်း ၅၀၀ တို့ကို လာချပါတယ်… မှာပြီး မကြာဘူး လာချတာ မြန်လို့.. စားခါနီးမှသာ မှာလိုက် ကွက်တိပဲ…
အစပ်လေး ပြေသွားတော့ ခုနက ဂဏန်းကို ပြန်ကိုက်ပါပြီ… အော်.. ဂဏန်းက ကိုက်ထားပြီးသားလေးဆိုတော့ သွားနာလဲ သက်သာတယ်.. ရှိုးလဲ မပဲ့ဘူး…ဒါလဲ ကောင်းတဲ့ အချက်တချက်ပဲ…
အသားလေးထုတ်ပြီး မိန်းမကို ခွံ့လိုက်ပါတယ်.. ခုနက အအေးတိုက်ထားတာလေးကို ပြန်ဖားတာပေါ့..
သူကလဲ ဖြေပေးထားပါတယ်.. ကောင်းသားပဲတဲ့.. ကျွန်တော်လဲ သူပြောတာ ဟုတ်လား.. မြည်းကြည့်ပါတယ်.. ဟုတ်တယ်ဗျ… တကယ်ကို ကောင်းတာပါဗျာ့… ဂွတ်တ်တ်တ်…..
အချိန်ကလဲ ပြည့်တော့မှာဆိုတော့ ကျန်တာလေးတွေ သုက်သုက် မြည်းလိုက်ရအောင်… ကောင်းတယ်ဗျ.. တော်တော်လေးကို ကောင်းပါတယ်.. ငါးနီတူသုပ်ကလေးက မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေ အကြိုက်…
ချဉ်စပ်လေး.. ဒါကိုမှ ငါးနီတူက ကြွပ်တုန်းပဲ ဆိုတော့… ပိုကောင်းသွားတယ်…
မြေအိုးမြီးရှည်လေးက ပြောစရာ မလိုဘူးဗျ.. ကောင်းချက်က…. ဒါပေမဲ့ တခုပဲ ပဲငပိမထည့်ပေးထားတော့ နည်းနည်းတော့ ပေါ့တယ်.. ဒါပေမဲ့ ကောင်းတုန်းပါပဲ…
ယိုးဒယား သင်္ဘောသီးထောင်းလေးကတော့ မဆိုးပါဘူးတော့ ပြောရမယ်.. သူ့ဈေးလေးနဲ့ သူပေါ့… ၅၀၀ ကိုး.. မကြိုက်ဘူးလဲ မဟုတ် ကြိုက်တယ်လဲ မဟုတ်… ခြုံပြောရရင် ကောင်းပါတယ်ပေါ့…
အဲဒီဆိုင်မှာ တခြားစားစရာတွေ ရှိပါသေးတယ်… ပသျှူးထမင်းကြော်တို့၊ ကတ်ကြေးကိုက်တို့၊ မလေးရှားခေါက်ဆွဲကြော်တို့… တုန်ယမ်း ဟင်းချို .. အထူးသဖြင့် ပင်လယ်စာ တုန်ယမ်း..
အကုန်နီးပါးကောင်းပါတယ်.. မြည်းပြီး ပြောဖို့က အချိန်ကလဲ မလောက်တာရယ်… ဗိုက်ကလဲ မဆန့်တာရယ်.. ဘက်ဂျက်ရယ်ကြောင့် မပြောပြဖြစ်တော့တာပါ…
ဘယ်လိုစားစားပါ.. ၄၀၀၀ ကျော်တဲ့ အမယ်မရှိသလို… စားလို့ဝ ကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့ အတွက်.. မွေးနေ့ပွဲတို့ မိတ်ဆုံစားတာတို့ လဲ လုပ်လို့ကောင်းပါတယ်ဆိုတာ သတင်းကောင်းပါးရင်း….
ဒီတလအတွက် သွားမယ်၊ ၀ါးမယ်၊ မြိုမယ်၊ ဆို့မယ် အစီအစဉ်လေးကနေ နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်… နောက်တလတွေမှာလဲ ထပ်ဆုံပါဦးမယ်နော်…
လိပ်စာက အမှတ်(၁)/ မြေညီထပ်၊ ဗဟိုလမ်း နှင့် ညောင်တုန်းလမ်းထောင့်၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း 09 431 70591၊ 09 4200 14737 (Booking လုပ်လို့လဲ ရပါတယ်)…
အဲဒီစမ်းချောင်းမှာ ဂဇက် ရွာသူား ၃၀ ဝန်းကျင်လောက်နေသဗျ
စမ်းချောင်းမှာ အခုနောက်ပိုင်းဈေးသက်သာတယ် ။
ဟုတ်လား.. ကျွေးတာ မကျွေးတာ နောက်ထားပါ.. ကျွန်တော် တယောက်ပဲ မမြင်ဖူးသေးတာ ထင်တယ်.. ရွာသူားအချင်းချင်းထဲမှာ.. တွေ့တော့တွေ့ဖူးချင်သား.. လာရောက်ဆက်သွယ်ကြပါရန်… စမ်းချောင်းထဲက ရွာသူားများ.. ညနေတိုင်း နီးပါး.. အဲမှာ ညစာစားပါတယ်..လို့..
တကယ် ကျွေးပြီး.. စရိတ်ထုတ်ရမှာက kai ပဲဗျ.. ဘာလို့ဆိုတော့ အခုတင်ဆက်တဲ့ ရုပ်မမြင် အသံမကြား အစီအစဉ်ရဲ့ ဘောစိက သူကိုးဗျ…
ရွာသူားတွေ တွေ့ဆုံပွဲနဲ့ ဆုပေးပွဲလုပ်ခဲ့တာဘ ၃ကြိမ်မြောက်ရှိပြီးပါပြီ ။
အဲဒီအချိန်မှာ အဆင်ပြေသူတွေတွေ့ချင်သူတွေလာကြတာပါဘဲ ။
ရွာသူားတွေစုပေါင်းလှူတာကတော့ အကြိမ်မနဲတော့ဘူး ။
ရွာသူားတွေကိုတွေ့နိုင်သလို ရွာအကြောင်းပိုသိလာနိုင်ပါတယ် ။
အဲဒီခါကျရင် ခင်ဗျား ဒီရွာကိုပြန်လာရကျိုးနပ်တယ်လို့ လက်ခံသွားလိမ့်မယ်
ဟုတ်ပါပြီ… Surmi ရေ… နောက်တခေါက်အလှူလုပ်ရင် ဖြစ်ဖြစ်.. တွေ့ဆုံပွဲပဲ ဖြစ်ဖြစ်လုပ်ရင် ခေါ်ဗျာ.. လာခဲ့မယ်.. ဒီလထဲတော့ ခရီးတွေ ထွက်ရမှာ… ကျိုက်ထို၊ မော်လမြိုင်… ပြည်၊ မကွေး၊ ပခုက္ကူ… ကွန်ပျုတာတွေ စာရင်းလိုက်ကောက်ရမှာ.. အဲဒီက ရွာသူားတွေရော ရှိလား.. တခါတည်းတွေ့လို့ရတာပေါ့…
ဒီဂဇက်စာမျက်နှာမှာ ပို့စ်တင်ပြီးဖိတ်တာပါဘဲ ။
နယ်ကရွာသူားတွေကိုတော့ ဘယ်သူဘယ်မှာဆိုတာ အတိအကျမသိဘူး ။ရှိနိုင်ပါတယ် ။
သူလည်း မန်းစားညွှန်ရေးဖူးသေးတယ် ။အမေဒစ်ဂန် ဂွဇွတ်သတင်စာမှာတောင် ပါခဲ့သေးတယ်ထင်တယ်
အမှန်ဆို ညွန်းတဲ့ သူက ဝယ်ကျွေးကြေးးးး
သွားစားဖြစ်တဲ့ ဆိုင်တွေ စာရင်းရေးပြီး ရန်ကုန်စားညွှန်လုပ်လိုက်။
ဟုတ်ပါပြီဗျာ.. ကျွေးပါ့မယ်ဗျာ.. ကျွန်တော်က မြေအိုးမြီးရှည်ကျွေးမယ်.. ဇီဇီက ဂဏန်းပြန်ကျွေးလေ.. ဟီးးးးး
လုပ်မှာပါ.. နောက်ထပ်သွားစားနေကျ ဆိုင်တွေ လုံးဝ အငြိမ်းတွေ.. ကြေးအိုး လမ်းညွှန်ဖြစ်ဖို့တောင် များမှာ.. ကြေးအိုးလဲ တအားကြိုက်လေ.. ဒါပေမဲ့ စားကောင်း သက်သာတွေ တင်မှာပါ.. ကျွန်တော်လဲ အဲလိုဆိုင်တွေပဲ ကြိုက်တာ…
ရေမြေ့သနင်း တင်ဆက်တဲ့ ရုပ်မမြင် အသံမကြား ၊သွားမယ်၊ ၀ါးမယ်၊ မြိုမယ်၊ ဆို့မယ် အစီအစဉ်လေး
ရွာသူားတွေ တွေ့ဆုံပွဲနဲ့ ဆုပေးပွဲလုပ်ရင်လာခဲ့ပေါ့ဗျာ…ပျော်ပျော်ပါးပါးဆုံကြတာပေါ့
အစီအစဉ်လေးကို အားပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. တကယ်ကိုလဲ အဲဆိုင်က တန်တယ်ဗျ.. စားလို့ကောင်း ဆားဗစ်ကောင်းတယ်.. ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးမှ ထပ်တင်ပေးဥိးမယ်…. ၂ ယောက်ကို ၃၀၀၀ လောက်ဆို ဗိုက်ကားတယ်.. ရွေးတော့စားရမှာပေါ့.. ၅၀၀ တန် ၃ မျိုးလောက်နဲ့ ထမင်းပေါ့.. စားနေကျဆို ငါးနီတူသုပ်နဲ့ မြေအိုးမြီးရှည် .. ထမင်းတလုံး.. လက်ဖက်ထမင်း တပွဲ ၅၀၀ ပဲနော်.. ယိုးဒယား သဘောင်္သီးထောင်းနဲ့ သူတို့ပေးတဲ့ စွပ်ပြုတ်နဲ့.. ဗိုက်ကိုကားနေတာပဲ.. ဒါတောင် ကျွန်တော်က အစားပုတ်နော်… လူ ၁၂ ယောက်လောက်နဲ့ သွားစားတယ်.. အမယ်ကြီးတွေ မှာတယ်.. ၂၀၀၀၀ ပဲ ကျတယ်.. လူတိုင်းလဲ ကျေနပ်တယ်… ခုလဲ ရှေ့အပတ် တပွဲရှိဦးမယ် ထင်တယ်.. ဟေ ဟေးးးး…
အော်.. ဆော်ရီး ကြီးမိုက်ရေ.. စားစရာတွေ ပွဲတွေ ပြောရင်း မေ့လို့.. ဟုတ်.. တွေ့ဆုံပွဲကျရင် ခေါ်ပါ.. လာခဲ့ပါ့မယ်.. မဟေသီလဲ ခေါ်ခဲ့မယ်… ကျွန်တော်ကတော့ ငယ်မယ်ထင်ပါတယ်.. အသက်ပြောတာပါ.. ၂၉ ပဲ ရှိသေးတယ်..
ဒါဆို ကျုပ်ထက် ၂ နှစ်ကြီးတာပေါ့…လေးစားပါတယ် :s:
ဟားဟားဟားဟား… အိလို မီနောက်နဲ့ယေဂျာ…
အော်.. ဦးဦးရေမြေ့သနင်းက..အသက် 29 ပဲ ရှိသေးတာလား ..
ကျနော့်အသက်က ဆယ်ခြောက်နှစ် တစ်ခါ + ဆယ်နှစ်တစ်ခါ…
ဦးဦးထက်..ငယ်ပါတယ် ။ ( အသက် )
သွားမယ်၊ ၀ါးမယ်၊ မြိုမယ်၊ ဆို့မယ် အစီအစဉ်ကိုတော့..ကြိုက်သွားပြီ..
နောက်တစ်ခါ.. ဘယ်လို …ဆိုင်မှာ..ဘယ်လို…မျြိုဆို့ …အဲ… စားရမလဲ..ဆိုတာလေး..
ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ညွှန်းဦးမလဲ…လို့ ..
ရေမြေ့သနင်းရဲ့ ရုပ်မမြင်အသံမကြားအစီအစဉ် ပီပြင်ပုံများ မျက်စေ့ထဲမှာ ကောင်းထက်ဇော်ကိုတောင် မြင်ယောင်လာတယ်။
စမ်းချောင်းအဲ့ဒီနားက အစားအသောက်အရမ်းပေါတယ်… အဖော်ကောင်းကောင်းရှိမှသွားစားအုန်းမယ်… ရှမ်းဆိုင်တစ်ဆိုင် နာမည်တော့မမှတ်မိ… လမ်းထောင့်ကပဲ, အဲ့ဆိုင်က အမဲအူပြုတ်လည်းအရမ်းကောင်းတယ်… နောက် ကာဆင်ဘိုင်ကြက်သားသုတ်နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်က အမဲအူသုတ်ကတော့ လမ်းကြုံတိုင်းပာဆယ်ဆွဲတယ် … ငါးကင်ကျတော့ ဓာတ်ဆီဆိုင်မျက်စောင်းထိုးက ဆိုင်မှာဝယ်ဖြစ်တယ်.. အချဉ်တော့ကောင်းသား.. :)) .. ပုံမပာ အရေးနဲ့တင်ဗိုက်ဆာလာတယ်
ဓါတ်ပုံလေးပါရိုက်ခဲ့ပြီး တွဲတင်ပါလားကွယ် ။
ဟုတ်.. ဒီတပတ် တနင်္ဂနွေဆို ပွဲ တပွဲ လုပ်ဖို့ ရှိတယ်.. ယောက်ဖ မွေးနေ့လေ…အဲခါကျမှ ဓာတ်ပုံနဲ့ တကွ သေချာ ဖော်ပြပေးပါ့မယ်.. အခုလို အားပေးချီးမြှင့်ကြတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. နောက် ၂ ပတ်လောက်ဆို ရွှေနဂါး ကြေးအိုးဆိုင်လေး အကြောင်းကို သွားမယ်၊ ၀ါးမယ်၊ မြိုမယ်၊ ဆို့မယ် အစီအစဉ်မှာ ဖော်ပြပါမယ်… မကြာမှီလာမည် မျှော်ပါ.. ပုံနဲ့ ဖော်ပြနိုင်အောင်ပါ.. ကြိုးစားပါ့မယ်…:)
စားစရာ အကြောင်းပြောတာများ ပုံလေးနဲ့တင်ပါလား…
ဒါမှ သွားမယ်၊ ၀ါးမယ်၊ မြိုမယ်၊ ဆို့မယ် အစီစဉ်ကိုကြည့်ပြီး…
သွားချင်၊ ၀ါးချင်၊ မြိုချင်၊ ဆို့ချင် ဖြစ်လာမှပေါ့..နော့်
တကယ်ကို ဆောရီးပါဗျာ.. ကျွန်တော် ဒီတပတ်သွားရင် ရှယ် ရိုက်ခဲ့ပါ့မယ်ဗျာ..နော်… နောက် ၂ ပတ်နေရင် ရွှေနဂါး ကြေးအိုးဆိုင်လေး အကြောင်းလဲ အားပေးဖို့ ကြိုတင် သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါတယ်…:)